Ralph Breaks the Internet (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2018 111 min Animation
Animation ခဈြသူမြားအတှကျ Ralph နဲ့ Vanellope ပွနျလာပါပွီ!
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ တိုးတကျပွောငျးလဲလာတဲ့ နညျးပညာခတျေကွီးထဲမှာ ဗီဒီယိုဂိမျး character လေးတှေ ဘယျလို survive လုပျကွတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး စိတျဝငျစားဖှယျ ဖနျတီးပုံဖျောထားတာပါ။
ဂိမျးထဲမှာ ဗီလိနျဇာတျကောငျဖွဈနပေမေယျ့ စိတျရငျးကောငျးတဲ့ Ralph နဲ့ ပွိုငျကားမောငျးတဲ့ ခဈြစရာကောငျမလေး Vanellope တို့ဟာ ဂိမျးလေးကစားလိုကျ၊ ရောကျတကျရာရာ စကားပွောလိုကျ၊ ဘီယာလေးသောကျလိုကျနဲ့ ပြျောရှငျငွိမျးခမျြးတဲ့ဘဝလေးကို အတူတကှ ဖွတျသနျးခဲ့ကွပါတယျ။ ဗီလိနျဇာတျကောငျအဖွဈ ၂၇နှဈလုံးလုံး လူမုနျးခံခဲ့ရတဲ့ Ralph အဖို့တော့ Vanellope လို သူငယျခငျြးကောငျးတဈယောကျ ရလာတာဟာ တနျဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ လကျဆောငျတဈခုပါပဲ။
ဒါပမေယျ့ တဈနကေ့တြော့ နှဈယောကျသား အဆနျးထှငျလှနျပွီး Vanellope ပါဝငျတဲ့ Sugar Rush ဂိမျးတဈခုလုံး အပိတျခံလိုကျရပါတယျ။ ပိတျခံရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကတော့ Vanellope ပွိုငျကားမောငျးနတေုနျး အသဈအဆနျးစှနျ့စားခနျးဖွဈအောငျ Ralph က လမျးသဈဖောကျပေးလိုကျတဲ့အတှကျ human player နဲ့ စညျးဝါးမကိုကျ အလှဲလှဲအခြျောခြျော ဖွဈကုနျရာကနေ စတီယာရငျ gadget ကွီး ပွုတျထှကျသှားလို့ပါပဲ။
အဲဒီ့ဖွဈစဉျကို အကွောငျးပွုပွီး ဂိမျး character တဈယောကျရဲ့ ဘဝဖွဈတညျမှုအတှကျ ဗီဒီယိုဂိမျးဆိုငျတှကေိုခညျြး အားကိုးလို့မရတော့မှနျး သဘောပေါကျသှားတဲ့ Vanellope လညျး Slaughter Race ဆိုတဲ့ online auto racing ဂိမျးတဈခုမှာ ဝငျကစားခှငျ့ရဖို့ အသညျးအသနျကွိုးစားပါတော့တယျ။
ဒီဇာတျကားလေးက လကျရှိအခြိနျမှာ IMDb rating 7.4/10, Tomatometer 88% ရရှိထားတဲ့ PG rating Comedy, Science, Fantasy animation လေး ဖွဈပါတယျ။ John C. Reilly, Sarah Silverman နဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော မတျမတျ Gal Gadot (Wonder Woman) တို့က အသံသရုပျဆောငျအဖွဈ အဓိကပါဝငျအားဖွညျ့ထားပါတယျ။
Animation ချစ်သူများအတွက် Ralph နဲ့ Vanellope ပြန်လာပါပြီ!
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ ဗီဒီယိုဂိမ်း character လေးတွေ ဘယ်လို survive လုပ်ကြတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖန်တီးပုံဖော်ထားတာပါ။
ဂိမ်းထဲမှာ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်နေပေမယ့် စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ Ralph နဲ့ ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေး Vanellope တို့ဟာ ဂိမ်းလေးကစားလိုက်၊ ရောက်တက်ရာရာ စကားပြောလိုက်၊ ဘီယာလေးသောက်လိုက်နဲ့ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို အတူတကွ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ၂၇နှစ်လုံးလုံး လူမုန်းခံခဲ့ရတဲ့ Ralph အဖို့တော့ Vanellope လို သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ရလာတာဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကျတော့ နှစ်ယောက်သား အဆန်းထွင်လွန်ပြီး Vanellope ပါဝင်တဲ့ Sugar Rush ဂိမ်းတစ်ခုလုံး အပိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ပိတ်ခံရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ Vanellope ပြိုင်ကားမောင်းနေတုန်း အသစ်အဆန်းစွန့်စားခန်းဖြစ်အောင် Ralph က လမ်းသစ်ဖောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် human player နဲ့ စည်းဝါးမကိုက် အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်ကုန်ရာကနေ စတီယာရင် gadget ကြီး ပြုတ်ထွက်သွားလို့ပါပဲ။
အဲဒီ့ဖြစ်စဉ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဂိမ်း character တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဖြစ်တည်မှုအတွက် ဗီဒီယိုဂိမ်းဆိုင်တွေကိုချည်း အားကိုးလို့မရတော့မှန်း သဘောပေါက်သွားတဲ့ Vanellope လည်း Slaughter Race ဆိုတဲ့ online auto racing ဂိမ်းတစ်ခုမှာ ဝင်ကစားခွင့်ရဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားပါတော့တယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးက လက်ရှိအချိန်မှာ IMDb rating 7.4/10, Tomatometer 88% ရရှိထားတဲ့ PG rating Comedy, Science, Fantasy animation လေး ဖြစ်ပါတယ်။ John C. Reilly, Sarah Silverman နဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မတ်မတ် Gal Gadot (Wonder Woman) တို့က အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ် အဓိကပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။
Option 1 storage.msubmovie.com 532 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 532 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 532 MB SD (480p)
Option 8 storage.msubmovie.com 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1